Manomana Am-pitandremana Ny Fiverenan’ny Iray Amin’ireo Zanaka Lahiny Saro-po Indrindra i Afganistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2016 17:24 GMT
Sary avy tamin'ny lahatsary YouTube.
Ho an'ny ankamaroan'ireo any Afghanistan, tsy anarana mila ampahafantarina intsony ny Gulbuddin Hekmatyar.
Fantatry ny maro amin'ny hoe ‘Mpivaro-kenan'i Kaboul’ ilay mpitarika ady sady lehiben'ny Hezb-e-Islami (Antoko Silamo), noho ireo heloka nataon'ireo andiany nandritra ny ady an-trano nihitarina teo amin'ny firenena, ary tiana na ankahalaina fatratr'ireo ankolafy maro samihafan'ny vahoaka mizarazara.
Kanefa hatreto aloha, manantena ny governemanta Afgana fa raha mamela heloka sy mamerina azy amin'ny laoniny, hiverina ho mafy ny vintana hisian'ny filaminana ao amin'ilay repoblika tapatapaka.
Ny 29 Septambra, nanao fifanarahana niaraka tamin'ny antokon'i Hekmatyar ny governemanta, izay hanome alalana azy hiseho ao Kaboul eo ambany fepetran'ny fahafahana amin'ny fanenjehan'ny governemanta Afgana, raha vao esorin'ny Etazonia ao amin'ny lisitra mainty manondro ireo mpampihorohoro ny anarany.
Maneso tokoa ny zava-mitranga ankehitriny satria ny Hezb-e-Islami no nahazo fanampiana lehibe indrindra avy tamin'ny CIA nandritra ny fifandonan'ny jihad Afgana tamin'ny fananiham-bohitry ny Sovietika.
Ny taona 1990, nandray anjara tamin'ny sasany tamin'ireo ady anatiny mafy teo amin'ny hetsika Mujaheedin ny andiany, izay nahavita nanàla ny tafika mena, fa resy nanetriketrika tamin'ny tsy nahavitany nitazona azy rehetra ho governemanta miray hina.
Rehefa nipoitra tany atsimon'ny tanànan'i Qandahar avy eo ny Taliban, nisintaka ny andiany ary naka ny faritra izay teo ambany fitantanan'ny Hezb-e-Islami ny Taliban.
Hatramin'ny fananiham-bohitra notarihan'i Etazonia tamin'ny taona 2001, nitarika ady nanohitra ny governemanta Afgana sy ny fiombonan-kery FIAS, i Hekmatyar sy ireo mpanaraka azy, sady nifanaraka indraindray na nifaninana tamin'ireo Taliban. Tafiditra tamin'ireo fanafihana nanaovana vy very ny aina maro, fifampitifirana, fanapoahana baomba sy famonoana miaramila sy olon-tsotra, ireo mpiadiny.
Na tsy fantatra aza ny tena misy an'i Hekmatyar ankehitriny, inoana fa mipetraka any amin'ny faritra misintaka ao amin'ny firenena izy, na any Pakistàna.
Mpitarika ady tsy mibebaka
Tamin'ny filazana fa tsy nanao zavatra tsy nety akory ilay antoko, nandà ny antson'ny Kaomisionan'ny Zon'olombelona Afgana ny zanany, izay mipetraka any Kaboul ankehitriny, kaomisiona izay nangataka ny Hezb-e-Islami mba hiala tsiny amin'ny vahoaka Afgana noho ireo heloka bevava nataony.
Mitovy amin'ny fihetsik'ireo rehetra mpitarika ady ao Afganistana io, izay ankoatra ilay mahery setra Abdul Rashid Dustom, samy nandà tsy niaiky ny fampijaliana nataon'izy ireo tamin'ireo vahoaka Afgana nandritra izay taona maro izay.
Na nanemotra ny dingana ho amin'ny fandriampahalemana sy ny fampihavanana tao amin'ny firenena aza ny tsy fetezan'izy ireo hiaiky ireo heloka maro natao tamin'ny ady, maro ihany koa ireo Afgana manaiky tsy sazoka ny filàna ny hitondràna ireo mpitarika ady ireo ho ao amin'ny valan'ny politika anatiny mba hananganana fiaraha-mitantana iray afaka hamantsika ny Taliban ary hamerina ny fahamarinan-toerana.
Miandry ary mijery ny fitondràna ny fifanarahana miaraka amin'ireo mpanaraka an'i Hekmatyar, i Naser Chemran, mpampianatra mipetraka any Kaboul:
Amin'ny ankapobeny, ataontsika hitondra zavatra tsara ny fidiran'i Hekmatyar sy ireo mpiadiny ho ao amin'ny governemanta. Kanefa ny fotoana ihany no afaka hilaza raha tsy hirongo fiadiana marina ireo mpanani-bohitra tsy manara-dalàna ireo na mety hoe hisy fihokoana hipongatra indray.
Ireo mpampiasa media sosialy hafa indray manohitra tsotra izao ny fifanarahana, nampahatsiahy ireo fanafihana bala afomanga nataon'ireo mpiadin'i Hekmatyar tao Kaboul nandritra ny adiny tamin'ny governemantan'i Mujaheddin taorian'ny Sovietika, ny taona 1990, ary nametraka sary mainty mombamomba azy ho mariky ny fanoherana.
Nitatitra ny Firenena Mikambana fa sivily 1.800 no maty tamin'ireo fanafihana bala afomanga tao Kaboul tao anelanelan'ny May 1992 sy ny Aogositra 1995, ary 500.000 ny isan'ireo olona nitsoaka ny tanàna.
Haroon Yousifi, Afgana mpanadrohadro mipetraka any Londona, milalao ny laza mpandravaravan'i Hekmatyar, ao amin'ny lahatsoratra ao amin'ny pejy Facebook-ny, manontany ny fotoana hisehoany am-pahibemaso any amin'ny renivohitra.
Rahoviana i Andriamatoa Hekmatyar no halefa (atsipy) ao Kaboul?
Nalefan'i Haroon Yousofi ny Alahady 25 Septambra 2016
Ao anatinà firenena izay tena eo amin'ny ivon'ny kajikajin'ny governemanta ny fiheverana ny fifandanjan'ny foko, milaza manana fanohanana be avy amin'ireo Pachtounes-n'i Afganistana i Hekmatyar , ary fanohanana kelikely eo amin'ireo Tajiks any amin'ireo faritra avaratra atsinanan'ny firenena.
Malaza amin'ny fitrandrahana ny fisamantsamahan'ireny foko mora tohina ireny ihany koa izy, nampitandrina fa ireo vondrona vitsy an'isa tsy Pachtoune miandany amin'ireo andian-tafika vahiny “dia hiatrika fanasaziana mafy tokoa mba ho lesona ho an'ny taranak'izy ireo taranaka any aoriana” tamin'ny fanambaràna nataony tamin'ny fetin'ny Aid Silamo ny taona 2013.
Sarotra sy misafotofoto ny politika Afgana. Ho an'ny hafa dia mpamono olona faobe ny maherifon'ny olona iray hafa, ary raha mbola tsy mamim-bahoaka mihitsy eo amin'ny ankamaroan'ireo Tajiks, Hazaras, Ouzbeks i Hekmatyar, mbola manana fahefana mandidy sy hajain'ireo olona antitra ihany izy ahatsiarovana ny tena vondrona Mujaheedin niandohana.
Miatrika fanamby iray goavana izao ny governemanta mba hampidirana azy sady mba tsy hihantsiana ny hatezeran'ireo sasany mora tohina, raha ny fiarahamonina Afgana kosa tsy maintsy hanaiky ny fisehoan'ny (indray) iray amin'ireo zanaka lahy saro-po indrindran'ny firenena.
3 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana